Fikambanana AV7 : Ampiaro amin’ i Ravalomanana amin’ izay ny didy -
AccueilRaharaham-pirenenaFikambanana AV7 : Ampiaro amin’ i Ravalomanana amin’ izay ny didy
“Mendrika andraisana fepetra hentitra sy haingana ny fihetsika izay naton’dRavalomanana ireny” io no valin-teny izay nomen’ny filohan’ny fikambanan’ny niaram-boina noho ny raharaha 7 febroary Rafaralahy Bona Jean pierre vantany vao nanotaniana mikasika ny hetsika izay nataon’ny filohan’ny TIM ny asabotsy lasa teo. ” Fiantsiana fanjakana ireny ka tsy tokony avela manao izay tiany I Ravalomanana satria dia tany misy lalàna ity” hoy hatrany ny filoha mpitarika ny AV7 ity. Raha nisy ireny hetsika ireny dia tafiditra anatin’ny fanakorontanana ny firenena , na dia efa nihezaka tsy niteny aza ny mpitondra fanjakana. Tsy nanadino ny nanaovan-dRavalomanana azy ireo taminy 7 febroary ny av7 ary namohaka vava mihintsy omaly fa “filoham-pirenena iray lian-dra i Ravalomanana amin’ ireo filoha nifandimby rehetra , ka sahiny ny mitondra ny olony mpanohana azy ho atao sorona”. Noho izany hoy ny filohan’ny AV7 tsy tokony hisy ny mozana tsidrian’ila , ka ny sasany avela mirihariha ny sasany namohan’ny fitsarana didy fampisamborana ” manao antso avo amin’ny SMM izay mba tsy hisian’ny mozana tsidrian’ila eto amin’ny firenena, ireo rehetra izay nanao heloka dia tokony hamohana didy fampisamborana fa tsy havela mirihariraha”.
Fihetsika miantsy fanjakana hatrany no asehon’ity filohan’ny antoko TIM ity hoy Bona Jean Piere , ary ny mahagaga dia mbola sahiny ny nilaza fa hitohy hatrany ny hetsika. Tsy vitan’ny vava ihany anefa hoy ny filohan’ny AV7 fa efa nisy mihintsy ny fitoriany ny prefen’ny polisy Antananarivo “ mbola sahiny ihany ve ny nitory ny prefen’ny polisy , nefa ny famaky efa eo ambony lohany”. Manoloana izany dia tsotra ny fandraisana fanaphan-kevitra tokony ho atao hoy ny filohan’ny AV7 “ gadrao amin’ izay Ravalomanana fa efa maro izay vitan’izay, ary zary lasa fomba fanao ratsiny ny fanakorontanana”. Ankoatran’io fanazavana nomeny i Bona Jean Pierre io dia nilaza ihany koa ity farany fa raha tena lehilahy Ravalomanana dia tokony ho vitaina aloha ny tokony ho ataony ” Aloavy ny onitra izay tokony alohany aminay, ary raha tena miseho milay izy dia aleo gadraina amin’izay”.